Nên mua Chiếu Điều Hòa Cho Bé loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Nên mua Chiếu Điều Hòa Cho Bé loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Nên mua Chiếu Điều Hòa Cho Bé loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ukuqagela kwesimo somoya umugqa womkhiqizo odingekayo emindenini, ikakhulukazi ngezinsuku ezishisayo zasehlobo. Ngalolu hlobo lwe-mat, uzoba nomuzwa opholile, okhululekile, oletha ukulala okujulile nokuphumuzayo. Kodwa-ke, ungakhetha kanjani ukuthenga i-air conditioner enhle yengane yakho kanye nokuthi yiziphi ama-air conditioner wezingane angcono kakhulu namuhla? Ake sithole ngesihloko esingezansi.
1 Iyini i-air conditioner?
2 Zingaki izinhlobo zama-air conditioner akhona?
2.1 I-Tencel air-conditioner mat
2.2 I-air-conditioning mat eyenziwe ngosilika
2.3 Umata we-air conditioning wengane u-Muji
2.4 I-Latex air-conditioning mat
3 Zizwa ngokuthengela izingane umoya opholile ongcono kakhulu namuhla
3.1 Ukukhethwa komata be-air-conditioning ngokusekelwe kumthamo wokupholisa
3.2 Ukukhetha iphrojekthi ngokusekelwe kumklamo
3.3 Ukukhethwa komata be-air-conditioning ngokusekelwe kumkhiqizo womkhiqizo
3.4 Khetha usayizi we-air conditioner
3.5 Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo
3.6 Khetha ikheli lokuthenga elithembekile
4 Amacansi aphezulu ayi-5 angcono kakhulu ezingane
4.1 4.1 I-rattan mat ene-air conditioning yezingane i-Muji, Japan
4.2 4.2 Amacansi okupholisa umoya wezingane nezingane ezincane iLatex LIDACO
4.3 4.3 I-air conditioning mat yengane iViscose Shikada
4.4 4.4 I-air-conditioner mat ye-baby Muslin Tree
4.5 4.5 I-Bee House air-conditioner Chiếu
Iyini i-air conditioner?
I-air conditioning mat imane nje iyinto yasekamelweni esiza ukupholisa uma isimo sezulu sishisa. Izinto zokwenza lolu hlobo lwe-mat kungaba usilika, i-tencel, … ukunciphisa ukushisa ngamasayizi amaningi ahlukene, imibala, kanye nemiklamo. Okuhambisana nalokho intengo yomkhiqizo nayo ihlukile, kusukela kumakhulu ambalwa kuya kwezigidi ezimbalwa zama-dong.
Zingaki izinhlobo zama-air conditioner akhona?
Njengamanje emakethe, ama-air-conditioned mats ahlukaniswe ngezinhlobo ezi-4 ngokusekelwe ezintweni ze-mat. Ngayinye yale migqa yomkhiqizo inezinzuzo zayo kanye nokubi, ifanele izidingo ezihlukene zomthengi ngamunye, izinjongo, nezimo zezomnotho.
I-Tencel air-conditioner mat
Lona umata owenziwe nge-cellulose otholakala ku-pulp yokhuni yezihlahla ezifana ne-eucalyptus, eucalyptus, njll. Ngakho-ke, lolu hlobo lwe-mat luphephile kakhulu kubasebenzisi ukuthi balusebenzise, ​​lunikeza ukumuncwa okuhle komjuluko, ubushelelezi futhi alubangeli ukucasuka kwesikhumba, okuhlanganisa isikhumba sezingane ezincane nezinsana.
I-air-conditioning mat eyenziwe ngosilika
Lona umugqa wama-air-conditioner athathwa njengephephile futhi anobungani kakhulu kwemvelo namuhla. Lo mugqa womkhiqizo unikeza amandla okupholisa aphezulu, ukuthamba okuhle, futhi uletha ukunethezeka okukhulu kumsebenzisi.
Akukhona lokho kuphela, umata kasilika onemoya opholile ungavimbela isikhunta kanye namagciwane ayingozi empilweni yomsebenzisi, alethe indawo yokulala entsha nethambile.
Umata we-air conditioning wengane u-Muji
Lona umugqa wamacansi ane-air conditioning enezinhlangothi ezimbili usebenzisa izinto ezahlukene. Uma phezulu kwe-mat kuyimicu ye-rattan enesakhiwo sezinkulungwane zemigodi ephefumulayo, eletha ukupholisa ngemuva, phansi kwe-mat yindwangu kasilika, eletha induduzo lapho ulele phansi.
I-Latex air-conditioning mat
Lona futhi umugqa odume kakhulu wama-air conditioner projector namuhla. Lo mkhiqizo wenziwe ngokuphelele ngerabha yemvelo ene-elasticity ephezulu kanye nekhono elihle kakhulu lokupholisa. Ngalo mugqa wamacansi amancane enjoloba, abasebenzisi bazothola ngokushesha umuzwa opholile ngisho nangezinsuku ezishisayo zasehlobo.
Zizwa ngokuthengela izingane umoya opholile ongcono kakhulu namuhla
Ukukhetha amacansi ane-air-conditioning wezingane nezingane ezincane, abazali kudingeka banake lezi zindlela ezilandelayo zokuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlala uphephile esikhumbeni sezingane kanye nempilo kanye nokuletha ukupholisa, ukusiza izingane zilale ngokuthula.
Ukukhethwa komata be-air-conditioning ngokusekelwe kumthamo wokupholisa
Ikhono lokupholisa liwumgomo ophezulu omama okudingeka bawucabangele ngokucophelela ngaphambi kokuthengela ingane yabo i-air conditioner. Lokhu kuyisici esibalulekile esenza izinga lomkhiqizo.
Ukukhetha iphrojekthi ngokusekelwe kumklamo
Njengamanje emakethe kunemiklamo eminingi ehlukene yamacansi omoya, kusukela kokunethezeka nokuhle kuya kokudlalayo nokuhle. Ngakho-ke, uma ukhetha i-air-conditioning mat yengane yakho, kufanele ubeke kuqala imikhiqizo ethandekayo efanele iminyaka yaleyo ngane.
Ukukhethwa komata be-air-conditioning ngokusekelwe kumkhiqizo womkhiqizo
Lokhu futhi kungenye yezindlela ezibalulekile umama angeke azishaye indiva uma efuna ukukhethela ingane yakhe umkhiqizo ophephile nosezingeni eliphezulu. Eminye yemikhiqizo ehamba phambili enedumela lama-air conditioner ongabhekisela kuyo namuhla i-Muji, i-Muslin noma i-LIDACO, njll.
Khetha usayizi we-air conditioner
Ngaphambi kokukhetha i-air-conditioned mat, udinga futhi ukunaka ubukhulu bombhede wakho ukuze uqiniseke ukuthi umkhiqizo owukhethayo ufanelekile kakhulu.
Impahla ye-mat ithinta ngqo impilo nesikhumba sezingane ezincane. Ngakho-ke, khetha imikhiqizo enezinto ezinhle, ezisezingeni eliphezulu eziphephile kubantwana nasezinganeni.
Khetha ikheli lokuthenga elithembekile
Lesi sici sibaluleke kakhulu komama abafuna ukuthenga ama-air conditioning mats. Izikhungo ezihlonishwayo zizokunikeza imikhiqizo yekhwalithi ephezulu nephephile, ugwema ukuthenga izinto ezingelona iqiniso, okulingisayo noma izimpahla ezisezingeni eliphansi. Amakheli ambalwa ahloniphekile lapho ungathola futhi uthenge khona lo mkhiqizo i-Shopee, i-Lazada, noma i-Tiki….
Amacansi aphezulu ayi-5 angcono kakhulu ezingane
Ngeseluleko esingenhla, sithemba ukuthi omama bangakhethela izingane zabo umata wekhwalithi womoya ophephile nokuphepha okuphezulu. Kodwa-ke, ukuze wenze kube lula, ungabhekisela kuma-air conditioners angu-5 angcono kakhulu futhi adume kakhulu ngezansi.
4.1 I-rattan mat ene-air conditioning yezingane i-Muji, Japan
Lona umugqa wama-air conditioner angeniswa ngqo avela e-Japan. Lo mkhiqizo wenziwe ngemicu ye-rattan yemvelo emincane kakhulu enokwakheka okuvumelana nezimo nephezulu ye-rattan epholile kanye nendwangu kasilika ethambile ngaphansi.
Lo mugqa womkhiqizo unephethini yesimanje futhi kanokusho, efanelekile kuzo zonke izinkathi zonyaka ezine unyaka wonke. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo futhi uyathengeka futhi ungagoqwa ukuze uhlanzeke kalula.
Lolu hlobo lwe-rattan mat ye-Muji air-conditioned rattan inokuphefumula okuphezulu, ilungele ukusabalala endaweni ye-cushion, okuhlanganisa omatilasi abanwebeka kakhulu abafana nomatilasi basentwasahlobo, amakhushini erabha, … .
Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo unezinto zemvelo, ngakho-ke uhlala isikhathi eside ngisho nalapho ugezwa ngaphandle kokukhathazeka ngokuthinta ikhwalithi. Umkhiqizo futhi kulula kakhulu ukuwuhlanza uma usebenzisa ithawula likakotini ukuze usule wonke amabala noma womise amanzi endaweni ye-mat. Lolu hlobo lukamata lufakwe nebhande lokunwebeka ukuze kulungiswe umatilasi, kuvinjwe umata ukuthi unganyakazi uma usetshenziswa.
Intengo yesithenjwa: 255,000 VND
4.2 Amacansi okupholisa umoya wezingane nezingane ezincane iLatex LIDACO
Lona umugqa wamacansi we-air conditioning ovela kumkhiqizo odumile wase-Vietnamese emikhiqizweni yokulala. Lolu hlobo lwe-mat lwenziwe nge-latex encane yerabha kanye ne-Tencel, ehlinzeka ngokumuncwa okuhle komswakama kanye nokunwebeka okuphezulu, ukushelela lapho isetshenziswa.
Umata unomklamo omuhle futhi ohlekisayo kanye nokuthungwa, ofaneleka kakhulu izingane ezincane nezinsana. Ngaphandle kwalokho, ikhono le-mat eliphefumulayo nelisusa umswakama lihle kakhulu, linganciphisa izinga lokushisa ngo-3 – 6 degrees uma liqhathaniswa nezinga lokushisa elizungezile, lilethe ukunethezeka, ukupholisa, futhi linciphise ukungakhululeki okubangelwa ukuchitheka komjuluko.
Ingaphezulu le-mat lenziwe ngempushana ye-oki yekhwalithi ephezulu, ehlinzeka kokubili ukunethezeka nokuthambile lapho ulele futhi ingabulala amagciwane, ivikele wena nengane yakho ngokuphepha. Umkhiqizo uphinde ufakwe ibhande lokunwebeka ukuze ulungise umatilasi ngokuvikelekile.
I-LIDACO baby air-conditioning mat ibhekwa njengokuqina, ingasetshenziswa isikhathi eside, futhi ikugcinele imali eningi.
Intengo yesithenjwa: 649,000 VND
4.3 I-air conditioning mat yengane iViscose Shikada
I-Viscose Shikada iwumugqa womata bokupholisa umoya wezingane owenziwe ubuchwepheshe baseJapan futhi odabuka eChina. Kodwa-ke, nakuba kuwumkhiqizo waseShayina, omama bangaqiniseka ngoba lo mkhiqizo wenziwe ngemicu yesilika yezinga eliphezulu yemvelo, ephephile kokubili izingane kanye nezingane.
Lolu hlobo lwe-air conditioning mat lwakhiwe izendlalelo ezingu-2 zendwangu yekhwalithi ephezulu ukusiza ukulawula izinga lokushisa kangcono. Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo ubuye ube nekhono elihle lokumunca umswakama, amandla aphezulu e-antibacterial, okusiza ukuvikela ingane kumagciwane ayingozi. Indwangu eyenza umata nayo ithambile kakhulu, inikeza induduzo lapho ulele.
Umkhiqizo uhlala isikhathi eside ngamaphethini athambile athambile, afanele abafana namantombazane angaphansi kweminyaka emi-3 ubudala. Akukhona lokho kuphela, lo mugqa wamata ane-air-conditioning unenani elithengekayo, elifanele ngisho nemindeni yaseVietnam engenayo imali elinganiselwe.
Kodwa-ke, le-Viscose Shikada air conditioner isenobubi bokuthi okwamanje ayitholakali ukuthi ithengiswe emakethe yaseVietnam. Ngakho-ke, kuzoba nzima komama ukuthi “bathande” ngalolu hlobo lwe-mat.
Intengo yesithenjwa: 70,000 VND
4.4 I-air-conditioner mat ye-baby Muslin Tree
I-Muslin Tree iwuhlobo lwamacansi okupholisa umoya wezingane nezingane zaseJapan. Lo mkhiqizo ukhiqizwa ubuchwepheshe obuphambili nobesimanje, obuletha ikhwalithi enhle nokuphepha okuphezulu, ofanele isikhumba nempilo yezingane.
Lo mugqa wamata we-air-conditioning we-Muslin Tree uyinhlanganisela yemicu ye-rattan yemvelo emincane emincane nemicu yekhwalithi ephezulu kasilika, ehlinzeka ngokulawula okungcono kwezinga lokushisa. Akukhona lokho kuphela, lo mkhiqizo futhi kulula kakhulu ukuwuhlanza futhi wome ngokushesha kakhulu futhi ungagoqwa ukuze kube lula ukugcinwa nokugcinwa.
Iphuma nalo mugqa we-Muslin Tree one-air-conditioned mat, kukhona nomcamelo we-herbal wengane, ukusiza ingane ilale kangcono futhi ilale ijule.
4.5 I-Bee House air-conditioner Chiếu
I-Bee House ingenye yezinhlobo ezidumile zama-air conditioners namuhla. Lo mkhiqizo wenziwe ngentambo ye-poly engu-30%, i-bamboo fiber engu-40%, intambo kasilika engu-10% kanye nentambo kakotini engu-20%, ehlinzeka ngokunethezeka kokulala kwengane ngisho nalapho kushisa.
Lo mugqa wamata unikeza ukumuncwa komswakamo okuhle kakhulu, ukuphefumula okuphezulu futhi awubangeli ukumuncwa komjuluko lapho ulele. Akugcini lapho, i-Bee House air conditioning mat kulula kakhulu ukuyihlanza uma ingcolile noma ichitheka amanzi.
Umkhiqizo futhi unomklamo wephethini omuhle nenhle, uhlinzeka ngesipiliyoni sombala sangempela sengane yakho.
Kodwa-ke, ngalo mugqa we-Bee House air conditioning mata, kukhona amanothi ambalwa okumele omama bawaqonde ukuthi bangawasha kuphela ngesandla, hhayi ngomshini. Ngaphezu kwalokho, ukuze ugweme ukunciphisa izinga lomkhiqizo, akufanele uwuveze elangeni eliqondile.
Intengo yesithenjwa: 569,000 VND
Ngenhla ngu Imigqa emi-5 yamacansi okupholisa umoya wezingane Izipiliyoni zanamuhla ezihamba phambili nezibalulekile zisiza omama ukuthi bakhethe ulayini wamacansi abanesiphephetha-moya kanye nomata be-rattan abane-air-conditioning bezingane zabo. Ngethemba, ngolwazi oluwusizo olungenhla, uzokwenza ukukhetha okufanele kwengane yakho, usize ingane yakho ithole ubuthongo obungcono nobujulile ezinsukwini zasehlobo ezishisayo, ezishisayo.
Xem Thêm [TỔNG HỢP] Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Daikin Chi Tiết, Chính Xác | Muasalebang
Máy pha cà phê Smeg ECF01RDEU- đỏ | Muasalebang